9 Chirevo:+ “Shoko raJehovha riri kurwisana nenyika yeHadraki, uye rinogara paDhamasiko;+ nokuti ziso raJehovha rakatarira munhu wepanyika+ nendudzi dzose dzaIsraeri. 2 Hamati+ richaganhurana nayo; Tire+ neSidhoni,+ nokuti akachenjera kwazvo.+ 3 Tire rakazvivakira rusvingo runodzivirira, rikaunganidza sirivha seguruva uye ndarama sematope omumugwagwa.+ 4 Tarirai! Jehovha acharidzinga, achawisira uto raro rehondo mugungwa;+ uye iro richaparadzwa nomoto.+ 5 Ashkeroni richazviona rotya; uye Gaza richarwadziwawo kwazvo; Ekroni+ richarwadziwawo kwazvo, nokuti tariro+ yaro ichanyara. Mambo achaparara muGaza, uye Ashkeroni harizogarwi.+ 6 Mwanakomana asiri wepamutemo+ achagara muAshdhodhi,+ uye ndichaparadza kudada kwevaFiristiya.+ 7 Ndichabvisa zvinhu zvake zvakasvibiswa neropa mumuromo make nezvinhu zvake zvinonyangadza pakati pemazino ake,+ iye achasiyiwa nokuda kwaMwari wedu; uye achava saishe+ pakati paJudha,+ uye Ekroni achava somuJebhusi.+ 8 Ndichakomberedza imba yangu nomusasa sezvinoita boka revarwi rinorinda,+ zvokuti hapazovi nomunhu anopfuura uye hapazovi nomunhu anodzoka; uye mukuru webasa haazopfuurizve nepakati pavo,+ nokuti zvino ndazviona nemaziso angu.+ 9 “Fara kwazvo, haiwa iwe mwanasikana weZiyoni.+ Shevedzera mukukunda,+ haiwa iwe mwanasikana weJerusarema. Tarira! Mambo+ wako anouya kwauri.+ Akarurama, chokwadi akaponeswa;+ anozvininipisa,+ akatasva mbongoro hono yanyatsokura, yakaberekwa nembongoro hadzi.+ 10 Ndichaparadza ngoro yehondo pakati paEfremu uye ndichaparadza bhiza muJerusarema.+ Uta+ hwehondo huchagurwa. Achaudza marudzi nezvorugare;+ uye kutonga kwake kuchabvira kugungwa kusvikira kugungwa, nokubvira kuRwizi kusvikira kumigumo yenyika.+ 11 “Haiwa iwewo mukadzi, ndichabudisa vasungwa+ vako mugomba risina mvura ndichishandisa ropa resungano+ yako. 12 “Dzokai kunhare,+ imi vasungwa vane tariro.+ “Nhasi ndiri kukuudzawo kuti, ‘Haiwa iwe mukadzi, ndichakuripa migove miviri.+ 13 Nokuti ndichakunga Judha sezvandinoita uta hwangu. Ndichaisa Efremu pauta, ndichamutsa vanakomana vako,+ haiwa iwe Ziyoni, kuti varwe nevanakomana vako, haiwa iwe Girisi,+ uye ndichaita kuti uve sebakatwa romurume ane simba.’+ 14 Jehovha achaonekwa ari pamusoro pavo,+ uye museve wake uchabuda sezvinoita mheni.+ Changamire Ishe Jehovha acharidza hwamanda,+ uye achaenda nemadutu okumaodzanyemba.+ 15 Jehovha wemauto achavadzivirira, ivo vachaparadza,+ vokunda zvipfuramabwe. Vachanwa+—voita mheremhere—sokunge pane waini; uye vachazadzwa sezvinoitwa ndiro, semakona eatari.+ 16 “Jehovha Mwari wavo achavaponesa+ pazuva iroro seboka revanhu vake;+ nokuti vachaita sematombo ekorona yamambo anopenya pamusoro penyika yake.+ 17 Nokuti, haiwa, kunaka kwake kukuru sei,+ uye runako rwake rukuru sei!+ Zviyo ndizvo zvichaita kuti majaya akure, uye waini itsva ndiyo ichaita kuti mhandara dzikure.”+